सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिकरुपमा वृद्धि, कुन प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ? | Kendrabindu Nepal Online News
सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिकरुपमा वृद्धि, कुन प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?
१६ भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:४२
काठमाडौँ उपत्यकामा २९८ सहित देशभरमा ८९९ नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ५९६ पुरुष र ३०३ महिला रहेका छन् । योसँगै देशभरमा अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३९ हजार ४६० पुगेको छ । उपत्यकामा थपिएका सङ्क्रमितमध्ये काठमाडौँमा १९०, ललितपुरमा ६७ र भक्तपुरका ४१ रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बताए। पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरी ११ हजार १२९ नमूना परीक्षण भएको थियो । हालसम्म छ लाख ९३ हजार ४७२ नमूना परीक्षण भइसकेको छ ।
देशभरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढीरहेकाले परिवारभित्र यसबाट बच्ने विधि र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न खाँचो रहेको डा गौतमको जोड छ । परिवारमा जो कोहीलाई सङ्क्रमण भएमा उसलाई कहाँ र कसरी अरुबाट छुट्टै राख्ने भनी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “सरकारको मात्रै स्रोत र साधनले नपुग्न सक्छ, त्यसैले पहिले नै परिवार र समुदायले योजना बनाउनु पर्छ ।”
पछिल्लो २४ घण्टामा कोभिडका कारण थप सात जनाको मृत्यु भएसँगै देशभरमा सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २२८ पुगेको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार, मृत्यु हुनेमा तीन महिला र चार पुरुष छन् । मृत्यु हुनेमा महोतरीकी चार वर्षीय बालिका, गोरखाकी ६२ र रुपन्देहीकी ६८ वर्षीया महिला छन् । त्यस्तै, पुरुषमा झापाका ८६ वर्षीय, रौतहटका ४० वर्षीय, चितवनका ७८ वर्षीय र भक्तपुरका ७७ वर्षका छन् ।
सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिकरुपमा वृद्धि
Prevसेनाका नीतालाई स्वर्ण, दीपेन्द्रलाई रजत
नेपाल–भारत सीमा विवादको ‘डेडलक’ कहिले फुक्ला ?Next